आजको तस्वीर : कठैबरा, पानी ओसार्दै सांझ बिहान बित्छ सन्चाकर्मीहरुको ! – ebaglung.com
२०७५ जेष्ठ २५, शुक्रबार १७:४४	Top News, अन्य समाचार, विविध
कुस्मीसेरा, २०७५ जेठ २५ । गर्मीयाम सँगै जताततै खानेपानीको समस्या सिर्जना भएको छ । पानीको मुल, कुवा, जरुवा, सुक्दै गएका छन । सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा खानेपानी समस्याकै चित्रहरु अपडेट गरेर सरोकारवालाहरुको ध्यानाकृष्ट गर्ने प्रयास भैरहेको छ ।
के निसी भूजी तमान, के रिघा, पाण्डवखानी, दुदिलाभाटी, के सदरमुकाम र के जिल्लाको दक्षिण भेग सबै क्षेत्रका जनता काकाकुल अवस्थामा छन् ।
हाम्रा प्रतिनिधीहरु भने एक वर्षे कार्यकालको लेखाजोखा गर्नैमा व्यस्त छन् । कोहि रित्तो जहाज उडाएर नगद बुझाईरहेका छन् त कसैलाई अक्षय कोष स्थापना गर्न भ्याई नभ्याई छ । कोहिलाई भाषण गर्दैमा दिन बितेको थाहा हुँदैन भने कतै ईन्द्रलिला प्रदर्शन गर्न हम्मे हम्मे छ । बिचरा काकाकुल जनताहरुलाई पानी ओसार्दै प्यास बुझाउदैमा ठिक्क छ ।
एकजना फेसबुक मित्र काँशिराम आचार्यले केहि घण्टा पहिले आफनो फेसबुक वालमा कुस्मीसेरा बजारमा बस्ने शुभेक्षा एफएमका सन्चारकर्मीहरुले पानी ओसार्दै गरेको तस्वीरलाई पोष्ट गरेर उनिहरुप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेझैँ गरेर नगनपालिकाको कार्यशैलीलाई व्यंग्य कसेका छन् । योजना तर्जुमा देखी निरीक्षण सम्म सँगै साथै पुग्ने जैमिनी जोडीले कुस्मीसेराको खानेपानी समस्यामा किन ईन्द्रलिला देखाउन सकेन ? कुरो यहाँ बुझ्न सकिएन ।